March 2021 - MinSayYar
အခကခြဲ ဖှဈနတေဲ့ တိုငြးရငြးသား တှတှကြေ တ တြ နိုငသြလောကြ ဆကသြှယြ လှူဒါနြး သှားမယဆြိုတဲ့ နောဖြောအြယထြာ
အခက်ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေတွက် တ တ် နိုင်သလောက် ဆက်သွယ် လှူဒါန်း သွားမယ်ဆိုတဲ့ နော်ဖော်အယ်ထား မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နော်ဖော်အယ်ထား ကတော့ ခုလက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံတွ င်း ဖြစ် ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှု များတွင် ပြည်သူများနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းကာ တက်ကြွ စွာနဲ့ ပါဝင်နေသူ တစ်ဦးဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ အမှန် တရား ဘက်မှ ရပ်တည် ပေးနေ သူများကို လည်း ဂုဏ်ယူ နေကြောင်းကို လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန် ရ က်တွင် ရေးသားနေ တာလဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ပြီး ကျဆုံး […]
ext ဗဟုသုတ ဗေဒင်
ဒီနေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ တချို့မှာ လေပြင်းကျတယ်။တချို့မှာ မိုးကျတယ်။တချို့မှာ မြူထပ်တယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့။ ဘာကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းနေကြသလဲဆိုတာကတော့ အခြားသောဆရာများ တင်နေကြလို့ အတော်များများ သိနေကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အခုကျနော်ပြောချင်တာက ဒီနေ့ညကနေစလို့ လေးညနဲ့သုံးရက်လောက်အတွင်းကို သတိထားကြပါ။ အိမ်တွင်းမှာ(အထူးသဖြင့်မိမိအိပ်တဲ့နေရာ)ကို တတ်နိုင်သမျှ လင်းအောင်ထားပါ။ ညနေမှောင်လို့ နေရောင်ပျောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြွေပန်းကန်လုံးအသေးတစ်ခုထဲကို ဆားတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်အဖြူတစ်တိုင်စိုက်ကာ မီးဖိုဆောင်ထဲမှာ ထွန်းပါ။ ညဘက် သာမန်/ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံတွေ သိသိသာသာ ကြားလာရပါလိမ့်မယ်။ ကြားရင်လည်း သတိထားပြီးမှ စူးစမ်းပါ။ ညဘက် ခြံဝန်းအပြင်ကိုမဖြစ်မနေထွက်ရပြီဆို သိကြားသက်စောင့်ဂါထာ(ဝေဒါသာကုဂါထာ)ကို အနည်းဆုံးသုံးခေါက်ရွတ်ပြီးမှထွက်ပါ။ ညဘက် သားစိမ်းငါးစိမ်းလုံးဝမကိုင်ပါနဲ့။ ဒီရက်တွေအတွင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဒေါသထွက်တာမျိုးတွေ၊ ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသထွက်ပြီး ခြေပါလက်ပါတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်ပါ။ ညကင်းသမားများ အသံကြားရာသွားကြည့်ပါက အနည်းဆုံး နှစ်ယောက်လောက်ပါမှ သွားပါ။ […]
အိမ်ရှေ့ အမွှေးတိုင်ထွန်းခြင်း (သို့) နာနာဘာဝတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ အယူအဆတခု ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းတော်တင်ထားတာက ကြွက်ကပဲ လာနှိုက်စားနိုင်တယ်။ သရဲက လာနှိုက်မစားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်ရှေ့မွှေးတိုင်ထွန်းလိုက်တာက သရဲတွေ အိမ်ထဲဝင်လာနိုင်တယ်လို့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ မြင်အပ် မမြင်အပ်ဆိုတဲ့ထဲမှာ သရဲတွေလည်း ပါတယ်။ နေစရာရှိတဲ့သူကတော့ သာဓုခေါ်စရာရှိတာခေါ်၊ စားစရာရှိတာ စားပြီး ကိုယ့်နေရာကို ပြန်သွားမှာပဲ။ နေစရာမရှိတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး သရဲတွေက မပြန်ပဲ အိမ်ထဲ နေနေခဲ့မယ်။ တောက အမျိုးတွေ အလည်ခေါ်တယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေတဲ့ အမျိုးက လည်ပတ်ဘုရားဖူးပြီး ပြန်သွားတယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းနေတဲ့ အမျိုးက မပြန်တော့ဘူးလေ။ အဲဒီသဘောအတိုင်းပဲ။ အိမ်ရှင်က ခေါ်ထားတဲ့သရဲဖြစ်နေလို့ အိမ်စောင့်နတ်ကလည်း နှင်ထုတ်နိုင်စွမ်း […]
သားငယ်သတိရလာတော့မေးတယ် မေမေ ဖေဖေ သား ညာဖက်လက်ကလေး ဘယ်ရောက်သွားလဲ?သားလက်ခလေးရောတဲ့ 🥺🥺🥺..
သားငယ်သတိရလာတော့မေးတယ် မေမေ ဖေဖေ သား ညာဖက်လက်ကလေး ဘယ်ရောက်သွားလဲ?သားလက်ခလေးရောတဲ့.. မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေဖွင့်လို့ တတိယနှစ်တက်တော့ သားမှာ ညာဖက် လ က် မရှိတော့ဘယ်လိုပုံတွေဆွဲမလဲတဲ့ စာကြည့်တော့စာဖတ်တော့ ဘယ်ဘက် မျ က် လုံး တလုံးထဲနှင့် ဘယ်လိုကြည့်လို့အားမရ‌ တော့ဘူးတဲ့ ရှေ့ သွား တွေမရှိတော့.. ဘယ်လို စာတွေ အသံတွေ ထွက်နေမလဲ? တဲ့ ခြေ ထောက်နှစ်ဖက်လုံး ပြ င်း ထ န် ဒါ ဏ် ရာတွေနဲ့ဘယ်လိုလမ်းလျောက်ရမလဲတဲ့ ၂၇ ရက် နေ့က ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလစ်ဘီးလေးပြန်ရခဲ့ရင် ဘယ်လို လီဘာတင်ရမလဲတဲ့ သားမှာ ညာ ဖ က် လ က်မှ.. မရှိ တော့တာတဲ့..သားမုန့်ဖိုးလေးနဲ့ဆုဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးပြန်ရခဲ့ရင် လ က် တဖက်ကမရှိ […]
R2P ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ မြန်မာ့အရေးဖိအားပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ကြိုးပမ်းနေ-သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း
R2P ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ မြန်မာ့အရေးဖိအားပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ကြိုးပမ်းနေ-သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို စစ်ကောင်စီက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်နေမှုကြောင့် လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေ နေ့စဉ် သေဆုံးနေတာကို အမြန်ဆုံး အကာအကွယ်ပေးရေး ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ မဆို အသုံးပြုဖို့ သူ့အနေနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုစားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နယူးရောက် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအဖွဲ့ရုံးရှေ့ သူ့ကို လာရောက်အားပေးထောက်ခံသူတွေကို တွေ့ဆုံစဉ်မှာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင်မြတ်သူက ဆက်လက်ပြောပြမှာပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးရောက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ပြုလုပ်မယ့် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးရှေ့မှာ အင်္ဂါနေ့က […]
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာများမှ စုပေါင်းကာ ဂုဏ်ပြုပန်းစည်းနဲ့ ငွေသားအချို့လက်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာနေတဲ့ ဟန်လေး
အလှမယ် ဟန်လေးကတော့ လက်ရှိမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန် ရောက်ရှိနေတာပါ။ ပြိုင်ပွဲကာလပြီးသွားပေမယ့်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့်. မြန်မာနိုင်ငံသို့ မပြန်ရသေးဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေရတာပါ။ ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေပေမယ့်လည်း မြန် မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေအား သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် speak out လုပ်ပေးနေတာ.. လည်း ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေများကိုလည်း သူမဆီသို့ သတင်းတွေပို့ပေးဖို့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်.. များကလည်း ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးကို ရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားနေကြတာပါ။ မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဟန်လေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်.. ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာများမှ စုပေါင်းကာဂုဏ်ပြုပန်းစည်းနဲ့ ငွေသားအချို့လာပေးခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်း မသိ ဝမ်းသာနေကြောင်းကို ရေးသားထားတာပဲ […]
ယခုနှစ်မှာ အင်္ဂါဂြိုလ်နဲ့ သောကြာဂြိုလ်သင်္ကြန် အတာစားမည်
ယခုနှစ်မှာ အင်္ဂါဂြိုလ်နဲ့ သောကြာဂြိုလ် သြင်္ကန် အတာစားမည်။ ယခုနှစ်မှာ သြင်္ကန်စာ အလိုအရ ကြာသာပတေး တာစား တာညံ့တာ မဟုတ် အကောင်း ပါ ဒီနှစ် အင်္ဂါဂြိုလ် နဲ့ သောကြာဂြိုလ် တွေ ညံ့နေတာပါ။ အင်္ဂါဂြိုလ် ညံ့တော့ – တိုင်းပြည်မှာ စစ်တွေ – ဆန် ဆီ ဆား ဆေး တွေ – ဒီ ဒုက္ခတွေ ကို တွေ့တတ်တယ်။ သောကြာဂြိုလ် ညံ့တော့ -လူတွေ သွေးထွက်သံယို – သွေးတိုး သွေးပေါင်ကျ ခြင်း – သံ သွပ် သစ် တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေ ညံ့တာ ဒီနှစ်ထဲမှာ အင်္ဂါ _ […]
ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့ Miss Grand Myanmar 2020 အလှမယ် ဟန်လေးရဲ့ ဘဝအကြောင်း….
အခုလို အချိန်မှာ အခု လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကို international စင်မြင့် ထက်မှာ Speak Out လုပ်ပြီး အကူ အညီ တောင်းခံပေးတဲ့ဒါမျိုးကို နိုင်ငံ ကိုယ်စား ပြုအလှမယ် ဟု ပရိတ်သတ်‌ တော်တော် များများ ချီကျူး ရှိနေ ကြတယ်။ဒါကြောင့် ဟန်လေး ရဲ့ အခက်ခဲတဲ့ ခရီးစဉ် လမ်းအကြောင်းတွေကို ဖော်ပြ ပေးချင် ပါတယ်။သူမရဲ့ နာမည် အရင်းကတော့ သော်နန္ဒာအောင် တဲ့။မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် မြို့မှာ မွေးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်။ ဖခင် မရှိတဲ့ ဘဝမှာ အမေ့ အရိပ် ကို ခိုလှုံရင်း ဆယ်တန်း ကို ထူးထူး […]
အလှုရှင်တစ်ဦးကြောင့် သရဖူ ရောင်းစရာ မလိုဘဲ CRPH ကို တန်းလှူခွင့်ရလိုက်တဲ့ နှင်းသွေးယုအောင်
ပြည်သူများ စုပေါင်းကာ Federal Army ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် CRPH (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ် စားပြု ကော်မတီ) ကို ဝိုင်းဝန်းကာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်မှ လှူဒါန်းလျက် ရှိကြပါတယ်။.. ဒီထဲမှာမှ အလှမယ် နှင်းသွေးယုအောင်ကလည်း သူ့ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ “Miss Universe Myanmar 2018” သရဖူကို ရောင်းပြီး လှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။.. “CRPH (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ) ကို လှူဖို့ နှင်းသွေးဘဝရဲ့ တန်ဖိုးအထားဆုံး အမြတ်နိုးဆုံး Miss Universe Myanmar 2018 Crown ကို ရောင်းချင်ပါတယ်။အုတ်တချပ် သဲတပွင့်.. ဖြစ်ခွင့်ပြုပါ” လို့ နှင်းသွေးယုအောင်က ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုး သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှတဆင့် ပြောခဲ့ပြီး တနာရီအကြာမှာပဲ အမည်မဖော်လိုသူ […]
မနေ့က ထိုင်းသတင်းမှာ ကြော်ငြာသွားပါပြီ မိတ်ဆွေများအားလုံး သတိထားလို့ ရအောင်ပါ
ထိုင်းသတင်းမှာ ကြော်ငြာသွားတာပါ။ အကင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။မိတ်ဆွေများ အားလုံးသတိထားလို့ရအောင်ပါ… အပြာရောင်မှင်ကွက် အကွင်းဝိုင်း‌ပုံစံနဲ့ ကင်းမွန် ( ပြည် ကြီးငါး) ဒီအမျိုးအစားက အလွန်အမင်းအဆိပ် အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။.. ဘယ်လောက် ပူအောင်ပြုတ်ပြုတ်၊ ဘယ်လောက်ကင်ကင် သူ့အဆိပ်အ‌တောက်က ပျယ်မသွားပါဘူးတဲ့ တစ် ချို့ ဆိုင်ကြီးတွေမှာလဲ သတိမထားမိပဲ.. ပါလာတာတွေရှိနေလို့ပါတဲ့။မနေ့က ထိုင်းသတင်းမှာပြောသွားပါတယ်။ ဈေးသွားပြီး ချက်ပြုတ်နေတဲ့ တွေအိမ်ရှင်မတွေ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တွေကိုလည်း.. သတိပေးလိုက်ကြရ‌‌အောင်နော် လုံးဝကိုမစားသင့်ပါဘူးတဲ့‌။Photo ထိုင်းသတင်းမှCredit – Teresa Lun Pi ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန် ထိုင်းသတင်းမှာ ကြော်ငြာသွားတာပါ။ အကင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။မိတ်ဆွေများ အားလုံးသတိထားလို့ရအောင်ပါ… အပြာရောင်မှင်ကွက် အကွင်းဝိုင်း‌ပုံစံနဲ့ ကင်းမွန် ( ပြည် ကြီးငါး) ဒီအမျိုးအစားက အလွန်အမင်းအဆိပ် အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။.. […]